I-China Cover iphethini yokwenza ngokwezifiso imigaqo-nkqubo yokwenza ulwenziwo olulula iincwadana zamanqaku zabafundi kunye neFektri | Yuxingyua
Ipatheni yokujonga ngokwezifiso imigaqo-nkqubo yokwenza ngokwezifiso incwadi yamanqaku yomfundi elula
MOQ: Iikopi ezili-1000
Ukupakishwa kwemveliso: I-OPP ibhegi yokuncamathela kunye nebhokisi yokupakisha
Incwadana yamaphepha entwasahlobo yomfundi
Khetha iphepha leencwadana zamanqaku zabafundi:
Okokuqala, umgangatho wephepha. Ngokubanzi, iphepha elisetyenzisiweyo liphepha le-beige Daolin. Umgangatho wala maphepha mabini ngowona mgangatho uphezulu phakathi kwamaphepha eencwadana ezifanayo. Olu hlobo lwephepha lunokuncipha okuncinci, ukufunxwa kwe-inki efanayo, ukutyibilika kakuhle, ubumbano kunye nokuqaqamba okungafaniyo, ukumelana kwamanzi okunamandla, ukusebenza okunamacala amathathu, kunye nomgangatho olungileyo kunye nexabiso eliphantsi!
Incwadi yamanqaku yomfundi eyenzelwe wena
1. Iphepha yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwincwadi yamanqaku. Unokufuna incwadi engophisi ngosiba kwaye inemigangatho efanelekileyo yokubhala. 2. Ifomathi: Sineendlela ezahlukeneyo zokufezekisa iimfuno ezahlukeneyo, ezinokuthi zifezekiswe. 3.Ukuzinza: Iimveliso zethu zisebenzisa ukufudumeza ubushushu obuphezulu kunye neglu yesinyithi ebunjiweyo, amaphepha angaphakathi azinzile, kwaye iphepha linentsebenzo ethile engangeni manzi. Ukusetyenziswa ngokulula: kunokusasazwa ngokuthe tyaba, kwaye amaphepha angaphakathi ahlukaniswe ngokukhululekileyo. Lilonke, iimveliso zethu zezona uzikhethileyo
2. Okwesibini, umbala wephepha. Wonke umntu uyazi ukuba iphepha le-beige, lithambile ngombala, lukhetho kubantu abasebenzisa incwadana yokubhala ngaphakathi kumaphepha.
Ukukhuselwa kwamehlo kwiphepha lokubhalela elingaphakathi
Okwesithathu, ubukhulu bephepha. Kukho ubungakanani obubini bephepha elisetyenziswa rhoqo kwiincwadana zokubhala: iigramu ezingama-80 kunye neegram ezili-100. I-80 gram yephepha icekeceke kancinci kune-100 yeephepha, malunga nobukhulu obufanayo nephepha lethu lokubhala eliqhelekileyo. Zombini ezi ntlobo zamaphepha zinokusetyenziselwa amaphepha angaphakathi. Umahluko phakathi kwezi ntlobo zimbini zephepha yile: i-80 gram yephepha icekeceke kancinci, kwaye imivumbo ithambile, kwaye imvakalelo yokubhala iya kuba mnandi; Ngelixa iigram ezili-100 zephepha ziqina ngakumbi kwaye zibhaliwe Akulunganga kangange-80 yeegram, nganye inezibonelelo zayo.
Incwadana yokubhala yomfundi yePU
Ukucetyiswa kwezinto ezikhethiweyo zephepha kwiincwadi zamanqaku ezenzelwe wena
Okwesine, ukutyibilika kwephepha. Ukutyibilika kokubhalwa kwamaphepha kubaluleke kakhulu, okubaluleke kakhulu kwinkqubo yokwenza iphepha (ukunamathela). Umphezulu wephepha elilungileyo kufuneka ube mpuluswa kwaye ucabalele, kwaye ubhale kakuhle. Iphepha lomgangatho osezantsi linemvakalelo yokubhala ngokubhaliweyo, kwaye iphepha linengxolo engaphezulu.
Qing incwadi yamanqaku yomfundi entsha
Egqithileyo I-logo eyenziwe ngokwezifiso, i-notebook ephathekayo enamaphepha angaphakathi
Okulandelayo: Ukucaciswa okuqhelekileyo kwesiko sekhathuni yekhathuni yesilwanyana ikhathuni
Incwadi ebhalwe ngesandla yesikhumba
Iphepha lokuNgqinisisa iphepha lencwadana
Incwadana yokubhala ethambileyo
logo elungelelanisiweyo, iphepha elithandwayo elenziwe ngaphakathi ...
Umgangatho ophezulu wendalo onobungane bendalo ...
Custom yesikhumba umbala siko iinkcukacha busin ...
Elungiselelweyo yesikhumba umbala, wena ubucwebe wena ...